နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးပေါ် လိုက်ပြီး အဆိုးဝါးဆုံး အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ် ကြောင့် ဒီနှစ်အကုန်မှာ သေနှုန်း သိသိသာသာ ကြီး လျော့ကျသွားလိမ့်မယ်လို့ ဘီလ်ဂိတ်ပြော – Na Pann San
Covid – 19 ကြောင့် သေနှုန်းဟာ ဒီနှစ် အကုန် မှာ သိသိသာသာကြီး လျော့ကျသွား လိမ့်မယ် လို့ ဘီလ်ဂိတ် ကမှန်းပါ သတဲ့ ။
အင်္ဂါနေ့က CNBC နဲ့ အင်တာဗျူးလွှင့်ရာမှာ ဘီလ်ဂိတ်က အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဂိတ်အင်တာဗျူးအကြောင်းမပြောခင် ကမ္ဘာ့ Covid အခြေအနေကိုအရင်ပြောပါမယ်။ ယနေ့အထိ ကမ္ဘာမှာ Covid ပိုးတွေ့ရှိသူပေါင်း ၁၆.၉၇ သန်း ရှိပါတယ်။ နက်ဖြန်မှာ ၁၇ သန်းပြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ကူးစက်နှုန်းက ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။ ဒီတစ်လခွဲကာလအတွင်းမှာ နှစ်ဆတိတိဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ အလွန်မြန်ပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ၈ သန်းပြည့်ပါတယ်။ ၁၆ သန်းကို ဇူလိုင် ၂၅ မှာပြည့်တာမို့ တစ်လခွဲတောင်မကြာခဲ့ပါ။
အခု ၅ ရက်အတွင်းမှာ နောက်တစ်သန်းထပ်တိုးသွားပြန်ပါပြီ။ မယုံနိုင်လောက်အောင် ကူးစက်မှုမြန်ဆန်လွန်းပါတယ်။ ဒီနှုန်းနဲ့သာတိုးရင် လပိုင်းအတွင်း သန်း ၅၀ ဖြစ်သွားမှာပါ။ နှစ်မကုန်ခင်မှာ သန်း ၁၀၀ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာက အခုထိအမြင့်ဆုံး peak ကို မရောက်သေးတာပါ။ ရောက်ပြီးရင် Poission distribution နဲ့ဆင်းရင် နှစ်ဆလောက် ဖြစ်မှာပါ။ ကာကွယ်ဆေးရော ကုသဆေးရောအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီ။
လူတွေအကြောက်ဆုံးက Covid ကြောင့်လူသေဆုံးမှု နဲ့ ပျောက်ကင်းခဲ့ရင်တောင် ဆိုးရွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါခံ စားရမှုဖြစ်မှာကိုပါ။ နိုင်ငံနဲ့ လူအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး အခြေအနေဆိုးရွားနိုင်မှု အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာမှာ Covid ဖြစ်မှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၂၀ မှာ ယူကေနိုင်ငံက ၁၅. ၂ ရာနှုန်းအထိရှိပြီး ဆော်ဒီမှာတော့ ၁ ရာနှုန်းပဲရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံအများစုမှာတော့ သေနှုန်းဟာ ၄ ရာနှုန်းနဲ့ အောက်မှာပဲရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုလက်ရှိအခြေအနေကို တင်ပြအပြီးမှာ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ အင်တာဗျူးကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။
Gilead Sciences ရဲ့ Remdesivir ဆေးဟာ လူနာတွေအနေနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုပြတာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်တဲ့အထိ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ ဘီလ်ဂိတ်ကဆိုပါတယ်။ Remdesivir ဆေးကို အမေရိကန် FDA က မေလအတွင်းမှာ ဆေးရုံတွေရှိ Covid ရောဂါအခြေအနေဆိုးတဲ့လူနာတွေမှာ အရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့်ပြုထားတာပါ။
အကြောဆေးအနေနဲ့ပဲ ventilator နဲ့ အခြားအသက်ကူရှုကိရိယာသုံးရသူတွေမှာ ထိုးပေးခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လက Gilead Sciences ရဲ့ CEO Daniel O’Day က လူမှာရှုဆေးအနေနဲ့စမ်းသပ်သုံးနိုင်ဖို့ FDA က ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ inhaler ရှုဆေးဆိုတာက နှာခေါင်းကနေ အလွယ်တကူရှုပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ပိုးသတ်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးကို ဆိုလိုပုံရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ရောဂါစဖြစ်တာနဲ့ ဆေးရုံပြင်ပမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးစွဲနိုင်မယ့်သဘောဖြစ်တာမို့ #ရောဂါအခြေအနေဆိုးဝါးမှုကိုစောစောစီးစီးတားဆီးနိုင်မယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ စောစောစီးစီးကုလို့ပျောက်ရင် အသက်အန္တရာယ်သိပ်မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။ ဘီလ်ဂိတ်က အခြား Covid အတွက် ကုသနိုင်မယ့် #ကုထုံးနှစ်ခုရှိသေးကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဘယ်ဆေး ဘယ်ကုထုံးတွေလို့ အတိအကျမပြောပဲ ဒီနှစ်ကုန်မှာ Remdesivir လိုပဲ Covid ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမယ့်ဘေးက ကယ်တင်ပေးနိုင်မယ့် ဆေးနှစ်ခု ဒီနှစ်ကုန်မှာ ထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြောဆေးထက် သောက်ဆေးဖြစ်ဖို့များတာကြောင့် လူတွေစောစီးလွယ်ကူစွာသုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ Monoclonal antibodies နည်းဟာ အခြေအနေအကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်လာနိုင်ပြီး Regeneron, Eli Lilly နဲ့ AstraZeneca တို့က အသေအချာကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ ကုထုံးတွေစမ်းသပ်မှုဟာ ကာကွယ်ဆေးထက် ပိုမြန်တာမို့ လူတွေလက်ထဲမြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
🇺🇸 အမေရိကန်အစိုးရကလည်း လက်မနှေးပါ။ Regeneron Pharmaceuticals ကနေ Covid-19 antibody cocktail ကုထုံးကို ဒေါ်လာ သန်း ၄၅၀ ဖိုး စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးပါပြီ။ အဲ့ဒီ Covid-19 antibody cocktail ကုထုံးဆိုတာက လူဖန်တီးယူထားတဲ့ antibody နဲ့ Covid ရောဂါကပြန်သက်သာလာတဲ့ လူနာဆီက antibody တို့ကို ရောစပ်ထားတဲ့စပ်ကုထုံးပါ။
(antibody = ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်း)
အဲ့ဒီ ကုထုံးနဲ့ကုရင် လူနာကို ရောဂါကုနိုင်သလို ရောဂါကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လူနာဟာ အဲ့ဒီ antibody ကို အကြိမ်ကြိမ်ထိုးဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ ဘီလ်ဂိတ်ပြောခဲ့တဲ့ နောက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Eli Lilly ဟာ Shanghai Junshi နဲ့ပေါင်းပြီး တရုတ်ပြည်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက Phase 1 စမ်းသပ်ကုသမှုကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Eli Lilly ရဲ့ အမေရိကန်က ပါတနာကလည်း တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာ စမ်းသပ်မှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲ Oxford University နဲ့တွဲပြီး ကာကွယ်ဆေးထုတ်နေတဲ့ AstraZeneca က Vanderbilt University ကနေ antibody ကုထုံးကို လိုင်စင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Covid ကာကွယ်ဆေးကိုစောင့်မနေပဲ antibody ကုထုံးကိုအရင် ရနိုင်အောင် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပြိုင်တူ တွန်းပြီးကြိုးစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
-ဒီနှစ်အကုန် မှာ ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးလောက် ရနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
-ကုသဆေးဘက်က Remdesivir ကို လူတွေအလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
-ဘီလ်ဂိတ်အပြောအရ နှစ်ကုန်မှာ သောက်ဆေးနှစ်ခုပေါ်နိုင်ပါတယ်။
-antibody ကုထုံးသုံးခုလောက်ကလည်း အခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။
ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ အခုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါပြဿနာကြီးကို ကာကွယ်ဆေးမပေါ်ခင် ကုသဆေးတွေနဲ့ ကြောက်စရာရောဂါကြီးအဖြစ်မှ အသက်ဆုံးရှုံးမှာသိပ်မစိုးရိမ်ရတဲ့ ကုသဆေးရှိတဲ့ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပစ်နိုင်ဖို့များပါတယ်တဲ့ခင်ဗျား။
အဲ့လိုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ ထင်တာထက်ပိုမြန်ပြီး ပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘီလ်ဂိတ်မှန်းထားသလို ကုထုံးနဲ့ ကုသဆေးတွေရော ကာကွယ်ဆေးရော ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာ ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Covid – 19 ကွောငျ့ သနှေုနျးဟာ ဒီနှဈ အကုနျ မှာ သိသိသာသာကွီး လြော့ကသြှား လိမျ့မယျ လို့ ဘီလျဂိတျ ကမှနျးပါ သတဲ့ ။
အင်ျဂါနကေ့ CNBC နဲ့ အငျတာဗြူးလှငျ့ရာမှာ ဘီလျဂိတျက အခုလိုပွောကွားလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ဘီဂိတျအငျတာဗြူးအကွောငျးမပွောခငျ ကမ်ဘာ့ Covid အခွအေနကေိုအရငျပွောပါမယျ။ ယနအေ့ထိ ကမ်ဘာမှာ Covid ပိုးတှရှေိ့သူပေါငျး ၁၆.၉၇ သနျး ရှိပါတယျ။ နကျဖွနျမှာ ၁၇ သနျးပွညျ့ပါလိမျ့မယျ။
ကူးစကျနှုနျးက ကွောကျခမနျးလိလိပါ။ ဒီတဈလခှဲကာလအတှငျးမှာ နှဈဆတိတိဖွဈသှားခဲ့တာပါ။ အလှနျမွနျပါတယျ။ တိတိကကြပြွောရရငျ ဇှနျလ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ ၈ သနျးပွညျ့ပါတယျ။ ၁၆ သနျးကို ဇူလိုငျ ၂၅ မှာပွညျ့တာမို့ တဈလခှဲတောငျမကွာခဲ့ပါ။
အခု ၅ ရကျအတှငျးမှာ နောကျတဈသနျးထပျတိုးသှားပွနျပါပွီ။ မယုံနိုငျလောကျအောငျ ကူးစကျမှုမွနျဆနျလှနျးပါတယျ။ ဒီနှုနျးနဲ့သာတိုးရငျ လပိုငျးအတှငျး သနျး ၅၀ ဖွဈသှားမှာပါ။ နှဈမကုနျခငျမှာ သနျး ၁၀၀ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ပွဿနာက အခုထိအမွငျ့ဆုံး peak ကို မရောကျသေးတာပါ။ ရောကျပွီးရငျ Poission distribution နဲ့ဆငျးရငျ နှဈဆလောကျ ဖွဈမှာပါ။ ကာကှယျဆေးရော ကုသဆေးရောအရေးတကွီးလိုအပျနပေါပွီ။
နိုငျငံနှငျ့ လူမြိုးပျေါ လိုကျပွီး အဆိုးဝါးဆုံး အမြိုးမြိုး ဖွဈနတေဲ့ ကိုဗဈ ကွောငျ့ ဒီနှဈအကုနျမှာ သနှေုနျး သိသိသာသာ ကွီး လြော့ကသြှားလိမျ့မယျလို့ ဘီလျဂိတျပွော
လူတှအေကွောကျဆုံးက Covid ကွောငျ့လူသဆေုံးမှု နဲ့ ပြောကျကငျးခဲ့ရငျတောငျ ဆိုးရှားတဲ့နောကျဆကျတှဲရောဂါခံ စားရမှုဖွဈမှာကိုပါ။ နိုငျငံနဲ့ လူအမြိုးမြိုးပျေါမူတညျပွီး အခွအေနဆေိုးရှားနိုငျမှု အမြိုးမြိုးဖွဈနပေါတယျ။ အခုအခြိနျအထိ ကမ်ဘာမှာ Covid ဖွဈမှုအမြားဆုံး နိုငျငံ ၂၀ မှာ ယူကနေိုငျငံက ၁၅. ၂ ရာနှုနျးအထိရှိပွီး ဆျောဒီမှာတော့ ၁ ရာနှုနျးပဲရှိတာ တှရေ့ပါတယျ။ နိုငျငံအမြားစုမှာတော့ သနှေုနျးဟာ ၄ ရာနှုနျးနဲ့ အောကျမှာပဲရှိနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ အခုလကျရှိအခွအေနကေို တငျပွအပွီးမှာ ဘီလျဂိတျရဲ့ အငျတာဗြူးကိုဆကျလကျတငျပွပါမယျ။
Gilead Sciences ရဲ့ Remdesivir ဆေးဟာ လူနာတှအေနနေဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတဈခုခုပွတာနဲ့ သုံးစှဲနိုငျတဲ့အထိ အဆငျပွအေောငျ ကွိုးပမျးနကွေတယျလို့ ဘီလျဂိတျကဆိုပါတယျ။ Remdesivir ဆေးကို အမရေိကနျ FDA က မလေအတှငျးမှာ ဆေးရုံတှရှေိ Covid ရောဂါအခွအေနဆေိုးတဲ့လူနာတှမှော အရေးပျေါသုံးစှဲခှငျ့ပွုထားတာပါ။
အကွောဆေးအနနေဲ့ပဲ ventilator နဲ့ အခွားအသကျကူရှုကိရိယာသုံးရသူတှမှော ထိုးပေးခဲ့တာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့လက Gilead Sciences ရဲ့ CEO Daniel O’Day က လူမှာရှုဆေးအနနေဲ့စမျးသပျသုံးနိုငျဖို့ FDA က ခှငျ့ပွုခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ inhaler ရှုဆေးဆိုတာက နှာခေါငျးကနေ အလှယျတကူရှုပွီး အသကျရှုလမျးကွောငျးကို ပိုးသတျလို့ရတဲ့ဆေးမြိုးကို ဆိုလိုပုံရပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ရောဂါစဖွဈတာနဲ့ ဆေးရုံပွငျပမှာ လှယျလှယျကူကူ သုံးစှဲနိုငျမယျ့သဘောဖွဈတာမို့ #ရောဂါအခွအေနဆေိုးဝါးမှုကိုစောစောစီးစီးတားဆီးနိုငျမယျ့သဘောဖွဈပါတယျ။ စောစောစီးစီးကုလို့ပြောကျရငျ အသကျအန်တရာယျသိပျမစိုးရိမျရတော့ပါဘူး။ ဘီလျဂိတျက အခွား Covid အတှကျ ကုသနိုငျမယျ့ #ကုထုံးနှဈခုရှိသေးကွောငျး ပွောပါတယျ။
ဘယျဆေး ဘယျကုထုံးတှလေို့ အတိအကမြပွောပဲ ဒီနှဈကုနျမှာ Remdesivir လိုပဲ Covid ကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးမယျ့ဘေးက ကယျတငျပေးနိုငျမယျ့ ဆေးနှဈခု ဒီနှဈကုနျမှာ ထှကျပျေါလာနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အကွောဆေးထကျ သောကျဆေးဖွဈဖို့မြားတာကွောငျ့ လူတှစေောစီးလှယျကူစှာသုံးစှဲနိုငျပါလိမျ့မယျတဲ့။ Monoclonal antibodies နညျးဟာ အခွအေနအေကောငျးဆုံးနညျးဖွဈလာနိုငျပွီး Regeneron, Eli Lilly နဲ့ AstraZeneca တို့က အသအေခြာကွိုးပမျးနကွေပါတယျတဲ့။ အဲ့ဒီ ကုထုံးတှစေမျးသပျမှုဟာ ကာကှယျဆေးထကျ ပိုမွနျတာမို့ လူတှလေကျထဲမွနျမွနျရောကျနိုငျပါလိမျ့မယျတဲ့။
🇺🇸 အမရေိကနျအစိုးရကလညျး လကျမနှေးပါ။ Regeneron Pharmaceuticals ကနေ Covid-19 antibody cocktail ကုထုံးကို ဒျေါလာ သနျး ၄၅၀ ဖိုး စာခြုပျခြုပျထားပွီးပါပွီ။ အဲ့ဒီ Covid-19 antibody cocktail ကုထုံးဆိုတာက လူဖနျတီးယူထားတဲ့ antibody နဲ့ Covid ရောဂါကပွနျသကျသာလာတဲ့ လူနာဆီက antibody တို့ကို ရောစပျထားတဲ့စပျကုထုံးပါ။
(antibody = ရောဂါကာကှယျသောပဋိပစ်စညျး)
အဲ့ဒီ ကုထုံးနဲ့ကုရငျ လူနာကို ရောဂါကုနိုငျသလို ရောဂါကနလေညျး ကာကှယျပေးနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လူနာဟာ အဲ့ဒီ antibody ကို အကွိမျကွိမျထိုးဖို့ လိုကောငျးလိုပါလိမျ့မယျ။ ဘီလျဂိတျပွောခဲ့တဲ့ နောကျ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈတဲ့ Eli Lilly ဟာ Shanghai Junshi နဲ့ပေါငျးပွီး တရုတျပွညျမှာ ပွီးခဲ့တဲ့လက Phase 1 စမျးသပျကုသမှုကို လုပျခဲ့ပါတယျ။ Eli Lilly ရဲ့ အမရေိကနျက ပါတနာကလညျး တရုတျနိုငျငံပွငျပမှာ စမျးသပျမှာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့လကပဲ Oxford University နဲ့တှဲပွီး ကာကှယျဆေးထုတျနတေဲ့ AstraZeneca က Vanderbilt University ကနေ antibody ကုထုံးကို လိုငျစငျရရှိခဲ့ပါတယျ။
Covid ကာကှယျဆေးကိုစောငျ့မနပေဲ antibody ကုထုံးကိုအရငျ ရနိုငျအောငျ ကာကှယျဆေးနဲ့ပွိုငျတူ တှနျးပွီးကွိုးစားနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
-ဒီနှဈအကုနျ မှာ ကာကှယျဆေးနှဈမြိုးလောကျ ရနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
-ကုသဆေးဘကျက Remdesivir ကို လူတှအေလှယျတကူသုံးနိုငျအောငျလုပျနတောတှရေ့ပါတယျ။
-ဘီလျဂိတျအပွောအရ နှဈကုနျမှာ သောကျဆေးနှဈခုပျေါနိုငျပါတယျ။
-antibody ကုထုံးသုံးခုလောကျကလညျး အခွအေနကေောငျးနပေါတယျ။
ဘီလျဂိတျရဲ့ခနျ့မှနျးခကျြအရ အခုကမ်ဘာ့ကပျရောဂါပွဿနာကွီးကို ကာကှယျဆေးမပျေါခငျ ကုသဆေးတှနေဲ့ ကွောကျစရာရောဂါကွီးအဖွဈမှ အသကျဆုံးရှုံးမှာသိပျမစိုးရိမျရတဲ့ ကုသဆေးရှိတဲ့ရောဂါတဈခုအဖွဈ အသှငျပွောငျးပဈနိုငျဖို့မြားပါတယျတဲ့ခငျဗြား။
အဲ့လိုဆိုရငျ ကမ်ဘာကွီးဟာ ထငျတာထကျပိုမွနျပွီး ပွနျလညျသကျဝငျလှုပျရှားနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။
ဘီလျဂိတျမှနျးထားသလို ကုထုံးနဲ့ ကုသဆေးတှရေော ကာကှယျဆေးရော ဒီနှဈမကုနျခငျမှာ ရပါစလေို့ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။
သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့် ရဲ့ COVID-19 မိန့်ခွန်းကြောင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း စည်းလုံးမှုမပြိုကွဲဖို့ တိုက်တွန်းနေရဟု WHO အကြီးအကဲပြော